Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerarka ka dhacay Mareykanka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerarka ka dhacay Mareykanka
Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay weerarka ka dhacay Mareykanka
Muqdisho(SONNA) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul u cambeereysay toogashadii bahalnimo ee ka dhacday magaalada Les Vegas ee Dalka Mareykanka,taasi oo sababtay khasaare dhimasho iyo dhawac soo gaarey dad badan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa uga tacsiyadeeyey Dowladda iyo Shacabka Mareykanka dadkii ku dhintay weerarkii Argagixisanimo ee lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen dadbadan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Framaajo ayaa muujiyay sida ay u garab taagan yihiin shacabka iyo Dowladda Mareykanka islamarkaana meel looga soo wada jeesto ficilada xun xun oo ay ku dhaqaaqayaan kooxaha Argagixisada.
Dhanka kale Booliska Mareykanka ayaa baaraya dil wadareedkii ka dhacay magaalada Las Vegas kaas oo la sheegay inuu yahay midkii ugu xumaa ee sanadahan dambe ka dhacay waddankaasi.
Ninkan ayaa guriga uu deganaa waxaa laga helay qoryo, rasaas iyo waxyaalo qarxa oo aad u tira badan,waxaa weerarkaasi ku dhintay dad gaaraya 58 qof halka 500 in ka badana ay ku dhaawacmeen.
Previous articleFanaanada Maryan Mursal Ciise oo xaflad soo dhawayn ah loogu sameeyay Muqdisho
Next articleCiidanka Xoogga Dalka oo horjoogayaal ku dilay Gedo